USanta ngomntwana wakho othandekayo
Ngo-2003, uBawo Frost wayenendawo yokuhlala "yaseMoscow", ekhoyo epakini iVizminki. Apha unokutyelela uTeremkhulu-ntombi, iNdlu yoBumba, i-museum ye-sorse-story, i-spyce, ihamba ngeefama, idansa nge-spruce, ihamba nge-slides, itye itiye kunye nobusi ococekileyo kunye nepeyinti ye-gingerbread.
Kwilifa leSanta Claus ngentanda, kukho iinkqubo ezahlukeneyo zokuhamba ngeendawo ezahlukeneyo zabantwana. Kukho iindwendwe "Amabali angaqhelekanga kaBawo Frost", ngexesha apho abantwana bafunda malunga nezithethe zenkcubeko kunye neNew Year's ritual, malunga nomfanekiso kaBawo Frost kunye nabo "basebenzisana nabo" belizwe langaphandle kwifomu yomdlalo othakazelisayo. Kukho kwakhona "Uhambo oluqalayo" lwenkqubo, xa abantwana kunye neentlobo eziphathekayo ezihamba phambili zihamba ngendlela ye-fairy-tale, ukwenza imisebenzi yemidlalo emnandi. Ukongeza, unako ukudibana kunye nokuthetha noSanta Claus ngothandekayo wakho kunye ne-Snow Maiden kwaye ubukele ukusebenza kwezemidlalo.
Nangona kunjalo, ngo-Eva wonyaka omtsha, akukho zihambo okanye ieholide ezigcinwe apha. Ukuze u tyelele ibhola lomNyaka omtsha okanye ubukele umlilo, kuya kufuneka ukhethe ezinye iindawo.
Apho uSanta Claus wayehlala khona ukususela ngomhla wokuzalwa kwakhe, ngokuqinisekileyo ayengaziwa. Nangona kunjalo kusekwa ngokucacileyo ukuba iminyaka eyi-10 edlulileyo ngo-1998 Utata wayehlala kwindawo yaseVologda, u-5 km ukusuka kwiVeliky Ustyug. Okukhethiweyo kule ndawo akuzange kwenzeke ngengozi, kuba kubusika kakhulu, kwaye isixeko siye sazigcina zonke iindawo ezikhazimulayo zakhiwo zobudala. Umtya ophezulu weSanta Claus ulahlekile kwihlathi lepine. Ephantse kwinqaba kukho izindlu ezincinci zeplanga, apho abahambi kunye neendwendwe bahlala "embhedeni" emagumbini akhululekile. Kwiziko lokuzilibazisa kukho i-sauna, ichibi lokubhukuda, igumbi le-billiard. Ngamnye umncinci omncinci uya kunikwa isipho esenziwe kwi-workshop enkulu. Ngendlela, bobabini abazali kunye nabantwana banokuzama isandla sabo ekusebenzeni kumasifundisane omatshini, ukudala imembulo ngezandla zabo. Ukongeza kokumazi uSanta Claus umntwana othandayo, iindwendwe ziya kuba neBhola Yonyaka omtsha, ukubethelwa, amahhashi, umlilo kunye nemigubho yoNyaka omtsha. Ukongeza, unokutyelela kunye ne-Great Ustyug-indawo ekhethekileyo yedolophu.
Cinga kwangaphambili malunga noko uphendule umntwana ukuba ungathandabuzeki ukuba khona kweSanta Claus. Kuza kube nini udibana naye ekubeni le yinto yomlingani womntwana? Oyinyaniso uSanta Claus kumntu othandekayo kufuneka akhangele okwenene.
ISanta phantsi kolawulo
Kungekude kudlulileyo, iofisi yeposi yaseSanta ixhotyiswe ngeekhamera zewebhu, kwaye ngoku amawaka abantwana abasuka kwihlabathi lonke banokubukela uSanta kunye nabancedisi bakhe kwi-intanethi kwiiyure ezithile baye baphendule kwiincwadi zezingane kwiwebhusayithi ekhethekileyo. Khangela oku kuya kuba mnandi kubadala!
Unyaka omtsha kwindlela yaseNtshona
Nangona kunjalo, mhlawumbi ufuna ukutyelela iSrase yaseSerbia, kodwa inzala yeSt Nicholas, iSanta Claus? Emva koko wena kunye nosana lwakho ulindele uhambo olumnandi ukuya eLapland. Indawo yokuhlala yaseSanta i-8 km ukusuka kwidolophu yaseRovaniemi naseFinland. Idolophana yaseSanta Claus iquka indlu yaseSanta, iofisi, ii-workshops, indawo yokuthenga, indawo yokutyela, indawo yokuzonwabisa yasepiliti, ipaki yokuzonwabisa kunye neendwendwe ze-fairytale, apho kukho igumbi le-crystall rock kunye ne-circus ye-puppy. Kuyo yonke indawo i-gnomes i-masters - abancedisayo baseSanta Claus.
Ngeke ube nexesha lokumisa
USanta ubeka umntwana ngamnye emphethweni wakhe aze aqale ukubuza ukuba ufunda njani, uphulaphule umama wakho, kwaye ekugqibeleni ufumene uhlobo lwesipho somntwana amaphupha. Abazali baphulaphula ngokucophelela isipho esifuna ukufunyanwa phantsi komthi omtsha wonyaka. Kwidolophana yaseSanta, unokukhwela kwi-snowmobiles, umthendeleko we-gingerbread kwisibhakabhaka sikaMnu. Santa Claus (oko kuvela ukuba uSanta unomfazi!), Funda indlela yokulawula iqela le-reindeer. Unokutyelela i-zoo ye-arctic, ubukele ukusebenza kwimbonethi ye-puppet, ukukhwela izibheno uze udle kwindawo yokudlela ye-ice apho yonke ingaphakathi iyenziwa ngeqhwa nekhephu. Kwaye umthunzi wokugqibela wohambo uya kuba zibane ezikumantla!
Ngendlela, uSanta Claus okanye uSanta Claus banokubhala incwadi kunye nokuyalela isipho. Kule leta, qha ga mshelana nesipho (ngokuqinisekileyo, ukuze umntwana angayazi nantoni), aphi na amaphupha okufumana umntwana.
Kwi-Grandfather Frost Residence uya kufumana isipho oye uthumele kakuhle, bhala impendulo uze uyithumele. Ukufumana ileta evela kuTatomkhulu nesipho kuya kuba yindalo yangempela yomntwana! USanta Claus umntwana wakhe othandekayo ukhona kwiingcinga zakhe - kuyimfuneko ukuba athethe njalo.
Isimo soSuku lwaBantwana kwi-nursergart kunye nesikolo, ukhuphiswano. Cwangciso kwiklasi yeyure yoSuku lwaBantwana
Ingaba umntwana uyagubha? Izindlela ezintathu zokusombulula kakuhle ingxaki
Kuphi ukubamba iziqu: ii-4, 9 neye-11? Iholide ye-5!
Imifanekiso eyahlukeneyo yobomi bentsapho
Indlela yokudibanisa umsebenzi nokukhulisa umntwana?
Iingca zokungcola kubantwana: izizathu, ukunakekelwa ngxamisekileyo
Imfundo yaseplasini yabantwana
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 - owesifazane uDeva - waseTamara Globa no-Angela Pearl
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-19
Ikhekhe ngekhilimu, ehlotshiswe nge-icing
Ukuguqulwa kwexesha elidlulileyo: izibhengezo zobuhlanga kwimimandla yangaphakathi